Dziviriro yedata & Yakavanzika Citizenity of Antigua uye Barbuda
boka redu Murairidzi weAAAA (https://immi.company) uye vashandi vayo vanoedza kuchengetedza yako yakavanzika data uye yako ruzivo. Isu takaratidza pazasi maitiro atinotora nekushandisa data rako.
1. Mashandisiro atinoita yako ruzivo uye data
Murairidzi weAAAA inounganidza uye inoshandisa yako data neruzivo rwemunhu kugadzirisa matambudziko ekutonga uye tsigiro yevatengi, kubatsira vatengi vedu. Isu tinoshandisa yako data neruzivo rwemunhu kutarisa maitiro nemitemo yese nezvibvumirano.
2. Kushandiswa kwemashoko ako nedata kune zvinangwa zvekushambadzira
Kana iwe uchida kuti ese ruzivo rwako pachako rurege kuzoshandiswa gare gare nezvekukurudzira zvinangwa, tapota taura nesu pa info@vnz.bz uye isu tichave nechokwadi kuti haugamuchire chero kushambadzira kupihwa kana kumwe kuzivisa kubva kwatiri.
3. Kuunganidzwa kwemashoko emunhu uye data rako pachako
Ruzivo rwese kuti kambani yedu Murairidzi weAAAA kuunganidza kunouya kwatiri zvakananga kubva kwauri, sevatengi vedu. Yako yese data inochengetedzwa zvakavimbika uye inochengetwa mukambani yedu pasina mukana wekushandiswa kwavo nevechitatu mapato. Isu tinozochengetedza ruzivo rwako pachako huwandu hwakakwana hwenguva yekupa rutsigiro nekutungamira kwemasevhisi edu.
4. Rako Ruzivo Rwedu Kambani Inounganidza
Patinosangana nekambani yedu nekubvunza hofisi, nhare, nzira dzemagetsi dzekutaurirana, pamwe nekushanyira yedu Internet sosi, tinotora data nezve vashandisi nevatengi vedu vanoisa maodha vachishandisa iyi yekukurukurirana nzira uye nzira dzekufambidzana.
Iyo data yatinotora inogona kusanganisira ruzivo rwekudyidzana nekushambadzira, ruzivo nezvemitambo, data nezvemasisitimu, kutaurirana uye zvekushandisa manongedzo, ruzivo nezvevanotumira uye vanogamuchira mameseji akatumirwa kana kugamuchirwa nekambani yedu. Tinogona kuunganidza ruzivo nezve inguva nenzvimbo dzekupinda mumasevhisi edu kana zviwanikwa. Isu tinotora ruzivo nezve iyo nguva yekufambidzana, kuyerera kwekuchonya uye chero chero data dhata.
Iyi ruzivo inogona kuratidza iwe uye yako yekupinda nzvimbo uye mamwe makambani.
Kana iwe uchinetseka nezve data yako, unogona kutarisa saiti yedu isingazivikanwe.
Pamunokumbira, tinogona kukupa ruzivo rwatinochengeta pamusoro pako, zvichitarisirwa nekwainowanikwa. Ruzivo rwako harugone kuwanikwa kune vamwe vashandisi, kunze kwemamiriro ezvinhu ekusetwa kwemutemo uye kukumbira kwepamutemo kwematare emutemo ane mvumo yekuita kudaro.
Isu tinotora ruzivo nezve vashanyi kune webhusaiti yedu, tinounganidza maairesi eemail kana tichibata nekambani yedu, kambani yedu inounganidza nhamba dzenhare uye nharembozha kana ichibata nzvimbo yedu yekuonana kana parunhare kune mushandi.
Irwo ruzivo runounganidzwa nekambani yedu runonyanya kushandiswa pakuongorora pamwe nekuvandudza kwebasa redu, Internet yedu pfuma pamwe nebasa redu rose.
Chero ruzivo rwako harwuna kuendeswa kune vechitatu kunze kwenyaya yekusvitswa kwezvinhu kwauri, neinishuwarenzi yekuzvitakura, mune iyi nyaya ruzivo rwese rwunokosha ruchazoendeswa kune kambani inoendesa zvinhu kukero yako neinishuwarenzi. kambani. Nekuisa kodhi yekuendesa kwezvinhu pawebsite yedu kana parunhare, unobvuma kupihwa ruzivo rwako kune wechitatu mutungamiriri uyo aronga kuronga kuendesa chigadzirwa ichi kukero yako neinishuwarenzi.
Kana iwe usiri kuda kugamuchira kubva kwatiri chero mameseji kunze kwezvakakosha sechikamu chekuraira kwako uye kuuraya kwayo, iwe unogona kutinyorera pakero yedu: info@vnz.bz
5. Nzira dzekuchengetedza uye rafu hupenyu hweruzivo
Isu tinochengetera ruzivo rwako munzvimbo yedu yemutengi. Ruzivo urwu ruchashandiswa nekambani yedu uye huwandu hwenguva hwakachengetwa. Tinoda urwu ruzivo kuti rwupi rwekubvunza uye kugadzirisa matambudziko zvine chekuita nemasevhisi edu uye zvinodiwa nemutemo wekuchengetedza data. Isu tine kodzero yekuchengetedza ruzivo urwu mushure mekupedza basa redu nekutengesa, kunyangwe kana usisiri kushandisa masevhisi ekambani yedu. Ruzivo rwese ruchachengetwa kwenguva yakati rebei, kunze kwekunge mutemo kana zviremera zvematare nemirairo zvichitida kuti tizvichengete kwenguva refu.
6. Matatu mapato
Tine kodzero yekuendesa ruzivo rwako kune wechitatu bato rine hukama nekuurayiwa kwemirairo yedu kwauri. Pasina mvumo yako yekuwedzera, tinoendesa ruzivo rwako kune zvekutakura masevhisi, makambani einishuwarenzi ane hukama nehumiro yekutakura zvinhu. Tine kodzero yekuchinjisa kero yako izere, zita uye surname, nhamba yefoni pamwewo neimwe data inodiwa kuti upedze iyi odha. Isu tinopa ruzivo rwese kumakambani iwayo ayo anoshanda zvinoenderana nemutemo pamusoro pekudzivirira data uye kuchengetedza. Pakukumbira kwako, iwe unogona kugamuchira ruzivo kubva kwatiri kunaani uye kana data rako rakapihwa.
Hapana rondedzero dzevatengi vedu vanoendeswa kune vechitatu mapato, kunze kwekukumbira kubva kune zviremera zvehurumende, kana paine.
7. Email ziviso, kunyorerana, nhau uye kukwidziridzwa
Tine kodzero yekukutumira zviziviso, kuenderana, kutaura newe nefoni kana kuburikidza newebhusaiti kana iwe ukaisa rairo pamwe nesu munzira dzipi dzinogona. Zvese kutaurirana zvinogoneka chete pane nzira yekutaurirana yatinopihwa Isu tine kodzero yekusawanzo kutumira iwe ruzivo nezve zvigadzirwa zvedu, kuderedzwa uye kukwidziridzwa. Une kodzero yekuramba kugashira idzi ziviso nekutevera izvo kana kutinyorera pa info@vnz.bz
8. Kutarisa Email Kuenderana
Sechikamu chekuchengetedza kuchengetedza, isu tine kodzero yekuverenga chero tsamba inotumirwa kune vashandi vedu. Panyaya yezvinhu zvisina kuchengetedzeka zvetsamba chero ipi kana kuinamatira, senge hutachiona, isu tine kodzero yekubvisa kana kunonoka.
9. Cookie Mutemo
Yedu saiti inoshandisa makuki, ayo ari zvidiki zvidimbu zvekodhi uye mafaera ayo anovandudza mashandiro enzvimbo yedu pakomputa yako. Pazasi isu tinotsanangura ruzivo rwupi kana isu tichiunganidza makuki, mashandisiro atinoita uye patinouchengeta.
Iwe une kodzero yekukanzura kutorwa kwemakuki, asi panguva imwe chete, hatigone kuvimbisa mashandiro akanaka enzvimbo yedu.
Unogona kuverenga zvakawanda nezve makuki paWikipedia pano.
Isu tinokurudzira kushandisa makuki kushanda kwakanaka uye kwakaringana kwenzvimbo yedu kana iwe usina chokwadi kana iwe uchivada kana kwete. Iwe unogona kudzima kushandiswa kwemakuki kana iwe uine chokwadi chekuti unochida. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti makuki ese anoshandiswa kupa basa raunoda kushandisa.
Unogona kudzivirira bhurawuza rako pakushandisa makuki. Iwe unofanirwa kunzwisisa kuti kushandisa basa iri kurambidza kushandiswa kwemakuki nebrowser yako kunogona kuchinja mashandiro enzvimbo dzese dzese dzaunoshanyira kana kuti dzaunoda kushanyira. Kazhinji, kuremadza makuki kunokanganisa mamwe maitiro uye kugona kwenzvimbo, saka tinokurudzira kuti usarege kuki makuki.
Yakanangana Cookies Email
Yedu saiti inogona kuyeuka mushandisi kana iwe watove wakanyoreswa nesu, kukuratidza zvimwe zviziviso zvinogona kushandiswa kune vakanyoresa kana vasina kunyora vashandisi. Isu tinopa zvinyorwa zvetsamba kunyorera. Kana uchishandisa basa iri, tinoshandisa makuki anokurangarira iwe.
Kugadzirisa zvine chekuita nemakuki kuki
Webhusaiti yedu inoyeuka odha yako nekiki, zvigadzirwa zvawakasarudza uye zvinoyeukwa kana iwe ukashandisa webhusaiti yedu kuwedzera kuitira kuti zvigadziriswe kugadziriswa kunosanganisira kunyima kana kugadzirisa rako.
Yakabatana Cookies Mafomu
Kana iwe uchizadza chero mafomu pane webhusaiti yedu, makuki anogona kuchengetedza yako mushandisi data yekushandisa mune ramangwana kana tsamba.
Thirty Party Cookies
Pa webhusaiti yedu zvinokwanisika kushandisa makuki anopiwa nevanhu vechitatu vanovimba. Pazasi isu tichazotsanangura zvakadzama kuti ndeapi matatu-bato makuki aungasangana nawo kana uchishandisa yedu saiti.
Isu tinoshandisa Google Analytics, iyo yatinoda kuongorora saiti yedu. Makuki anokwanisa kuongorora nguva inoshandiswa pane yedu saiti, mapeji aunoshanyira, izvo zvirimo zvaunofarira, nguva yaunoshanyira saiti yedu.
Unogona kudzidza zvakawanda nezve Google Analytics cookie information pano.
Zvekare zvakare, tinokuyeuchidza kuti kuti saiti isashande zvakanaka, tinokurudzira kuti usiye makuki akavhurika.
Isu tinotora matanho ekudzivirira ekuchengetedza data rako zvakanyanya uye tinotora matanho ese akanaka kuona kuchengetedzeka kwavo. Zvichienderana nedata, isu tinoshandisa mabasa ekudzivirira password, kunyorera, kutonga kwekuwana, kubheja, kuendesa miganho uye kutendeka kwemamiriro ekunze kuchengetedza data rako kubva pakurasikirwa kana kushandiswa zvisizvo.
PAKUTANGA: Hatichengeti yako kiredhiti kana kiredhiti kadhi nhoroondo. Iyo data yekadhi rako yawaishandisa kubhadhara inogara yakanyorwa uye isina kuchengetwa.
11. Mibvunzo uye zvikumbiro
Kana iwe uine mimwe mibvunzo pamusoro peyakavanzika mutemo, kuchengetedzwa kwedata kana kushandisa kwavo mumasevhisi edu, unogona kutibata nesu neruzivo urwu: info@vnz.bz